အမည်မသိရောဂါကြောင့် နာဂဒေသတွင် ကလေးငယ် ၃၀ ကျော် သေဆုံး
စစ်ကိုင်းတိုင်းတောင်ပိုင်းဒေသ၊ အိန္ဒိယ နယ်စပ်ဒေသနှင့် နီးကပ်ပြီး နာဂလူမျိုးများနေထိုင်ကြသည့် ဝေးလံပြီး တောင်ထူထပ်သောဒေသတွင် ဝက်သက်နှင့် ဆင်တူသည့် ရောဂါလက္ခဏာများ ခံစားရသည့် အဖျားရောဂါ ဖြစ်ပွားနေခြင်းဖြစ်သည်
ကျူးကျော် ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ၃၀၀ ခန့်အား ဖယ်ရှားသွားမည်ဟု အစိုးရက သတင်းထုတ်ပြန်
ကချင်ပြည်နယ်၊ ဖားကန့်ဒေသတွင် ခွင့်ပြုချက်မဲ့ ဆောက်လုပ်ထားသည်ဆိုသည့် အစ္စလာမ်ဝတ်ပြုဆောင်တစ်ခု ဇူလိုင် ၁ ရက်နေ့တွင် မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရသည့် ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်ပြီး သတင်းထုတ်ပြန်ရာတွင် ထိုကဲ့သို့ ထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီ ရေစီးကြောင်း အရှိန်အဟုန်
အရပ်ဘက် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဗျူရိုကရေစီ ယန္တရားတို့၏ ကျွမ်းကျင်မှုအခြေခံဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည့် အစိုးရသစ်က ယင်း၏အောင်မြင်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းကို သံသယရှိနေသူများအား ၎င်းတို့၏ ကြောင့်ကြပူပန်မှုမှာ ကြောင်းကျိုးမဆီလျော်ကြောင်း ပြသနိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ တွိုင်လီ ကူဘာနော့ဗ် ရေးသားသည်။ ၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင် ကုလဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်က မြန်မာနိုင်ငံ၌ လုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်ရန် ဆုံးဖြတ်လိုက်ချိန်၌.
တွိုင်လီ ကူဘာနော့ဗ် ရေးသားသည်။
ဂျပန်မှ Aeon စတိုးဆိုင်များ မြန်မာပြည်တွင် ဖွင့်တော့မည်
ဂျပန်နိုင်ငံမှ လက်လီအရောင်းလုပ်ငန်းကြီးဖြစ်သည့် Aeon က စတိုးဆိုင်များကို မြန်မာနိုင်ငံတွင် ယခုနှစ်အတွင်း စတင်ဖွင့်လှစ်တော့မည် ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Aeon စတိုးဆိုင်များသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးဖွင့်လှစ်သည့် ပြည်ပ လက်လီ အရောင်းဆိုင်များ ဖြစ်လာမည် ဖြစ်သည်။ Aeon Co., Ltd နှင့် မြန်မာနိုင်ငံမှ Creation.
တစ်နှစ်လ ျှင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ခုနစ်သန်းခွဲအထိ လာရောက်ရန် မျှော်မှန်းထား
ယခင်က စစ်အစိုးရအုပ်ချုပ်ခဲ့သော ဆင်းရဲသည့် မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှ၏ ခရီးသည် အလာဆုံး နေရာတစ်ခုအဖြစ် ထွက်ပေါ်လာစဉ် ၂၀၁၉ ခုနှစ်မှ စတင်ကာ တစ်နှစ်လ ျှင် ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် ၇ ဒသမ ၅ သန်းကို ဆွဲဆောင်နိုင်လိမ့်မည်ဟု မြန်မာအစိုးရက မျှော်လင့်ထားသည်။ တစ်ချိန်က ပြင်ပကမ္ဘာနှင့် အဆက်ပြတ်နေခဲ့သည့်နိုင်ငံသို့.
အိုလံပစ်မှာ ဆုတံဆိပ်ရရှိအောင် ကြိုးစားမယ့် လက်ဖြောင့်တပ်သား
ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းအား ကြီးကြီးမားမား ပြောင်းလဲစေမည့် အစိုးရ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ ချီးကျူး
ဒေါ်လာဘီလျံပေါင်းများစွာ တန်ဖိုးရှိသည့် ကျောက်စိမ်းလုပ်ငန်းကို ကြီးမားစွာပြောင်းလဲရန် အစိုးရက ဆုံးဖြတ်လိုက်ခြင်းမှာ လူု့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို ရပ်တန့်ရန်နှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကို မြှင့်တင်ရန် ထူးခြားဆန်းသစ်သော အခွင့်အလမ်းတစ်ခုအဖြစ် လှုပ်ရှားတက်ကြွသူများက ချီးကျူးလိုက်သည်ဟု Thomson Reuters Foundation က ပြီးခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်က ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံတွင် လူအများ ပိုမိုပါဝင်နိုင်သည့်.
အရေးယူ ပိတ်ဆို့မှုများကြောင့် အာရှဘဏ်များ နေရာရနေ
အနောက်တိုင်းမှ ဘဏ်များက ဘေးမှ စောင့်ကြည့်နေရချိန်တွင် အာရှဘဏ်များသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် ထူးထူးကဲကဲ ခြေကုပ်ရရှိနေကြသည်။